बायोपिकमा देखिने छैन सनीको जीवनको यो राज!, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बायोपिकमा देखिने छैन सनीको जीवनको यो राज!
एजेन्सी। करनजीत वोहरा अर्थात सनी लियोनको जन्म १३ मे १९८१ मा क्यानडाको एक सिख परिवारमा भएको थियो। सनीका बुवा तिब्बतमा जन्मिएका थिए र दिल्लीमा हुर्किका थिए। सनीकीआमा हिमांचलको सिरमौरकी थिइन्। बाल्यकालमा सनी टम ब्वाइजस्ती थिइन्। त्यतिबेला उनलाई हकी खेल्ने ठूलो शोख थियो।
सनी लियोन पोर्न फिल्ममा आउनुपूर्व एक जर्मन बेकरीमा काम गर्थिन्। त्यसपछि उनले ट्याक्स एण्ड रियाटर्मेन्ट फर्ममा काम गरिन्। सनी लियोनी नर्स बन्न चाहन्थिन्। त्यही भएर उनले पीडियाट्रिक नर्सको पढाइ गरिन्। तर पोर्न उद्योगबाट बलिउडमा प्रवेश गर्ने उनी पहिलो अभिनेत्री बनिन्। यस्ता कमैमात्र अभिनेत्री छन्, जसको नाममा फिल्म बन्यो। सनीले २००५ मा आफ्नो नाम ‘सनी’ राखेकी थिइन्।
एक अन्तर्वातामा सनीले आफूले जीवनको पहिलो किस ११ वर्षको उमेरमा गरेको बताएकी थिइन्। जब उनी १६ वर्षकी भइन् तब उनले एक बास्केटबल खेलाडीसँग पहिलोपटक यौन सम्पर्क राखेकी थिइन्। सनीले पार्ट टाइम कमाइकालागि पोर्न उद्योगमा कदम राखेकी थिइन्। जहाँ उनको वास्तविक नाम करनजीत परिवर्तन गरेर नयाँ नाम सनी राखियो। ५० भन्दा धेरै पोर्न फिल्ममा काम गरिसकेकी सनी बलिउडमा काम गर्नकालागि पहिला अफर ‘कलियुग’ का लागि मिल्यो। तर यो फिल्ममा धेरै पारिश्रमिक माग गरेपछि उनलाई फिल्ममा अनुबन्धन गरिएन।
सनी लियोन जब सलमान खानको शो बिग बोस–५ आइन् तब उनी भारतमा झन लोकप्रिय भइन्। सनी लियोनले पोर्न उद्योगबाहेक बलिउडमा मात्रै होइन, तमिल, मराठी। बंगाली, तेलुगू र कन्नड फिल्ममा पनि अभिनेत्रीका रुपमा काम गरेकी छन्।
फोटोग्राफरबाट फिल्मकार बनेका दिलीप मेहताको एक डकुमेन्ट्रीमा सनी लियोनीको क्यानाडाको सार्नियादेखि भारतको महानगर मुम्बईसम्म आएको यात्राको कहानी छ। र उक्त डकुमेन्ट्रीको नाम थियो–‘मोस्टली सनी’। तर यो उनको पहिलो फिल्म भने होइन जुन उनको जीवनमा आधारित भएर बनेको होस्। यसअघि पनि उनको जीवन सार्वजनिक भएको थियो।